तीतो तितेपातीका मिठा गुण, थाहा पाउनुहोस् किन खाने तितेपाती – Khabarhouse
Khabar house | ५ श्रावण २०७७, सोमबार ०२:४७ | Comments
काठमाडौं : तीतो तितेपाती स्वास्थ्यका लागि बहुउपयोगी छ । तितेपाती नेपालका अधिकांश स्थानमा पाइन्छ । यस वनस्पतिका औषधीय गुण भने कमैलाई थाहा छ । अधिकांशले यसलाई घर पालुवा जनावरको थलामा सोत्तरका रूपमा प्रयोग गर्छन् । यस बास्नादार वनस्पतिलाई जनावरले मिठो मानेर खान्छन् ।
– युरोपमा यसलाई एक ‘कमन हर्ब’का रूपमा खानामा प्रयोग गरिन्छ । विभिन्न सुप, स्टु र सलादमा तितेपातीको फूल, पात र डाँठ पनि प्रयोग गरिन्छ । मासुका परिकारमा पनि मसलाको रूपमा यसको प्रयोग हुन्छ । फ्याटी ए’सिड कम र भिटामिन सी पर्याप्त हुने हुँदा स्वास्थ्यका लागि यो लाभदायक मानिन्छ ।
रक्सी खानेलाई कोरोना नलाग्ने होइन, कोरोना संक्रमणबारे भ्रम र यथार्थता : डा. रवीन्द्र समिर
यस्ता छन् कोरोनाबाट बच्ने १६ उपाय, १२ घण्टासम्म कोरोना जीवित रहन्छ: चिकित्सक
चिसोमा कोदोको ढिँडो खानाले स्वास्थ्यमा पुग्छ यस्तो फाइदा !
नेपालमा कोरोना भाइरसको जो’खिम कति, कसरी बच्ने ? यस्तो छ डा. पाण्डेको सुझाब